AirTies Mhepo 4920 Smart Mesh Mushandisi Chinyorwa - Manuals +
musha » AirTies » AirTies Mhepo 4920 Smart Mesh Mushandisi Chinyorwa
AirTies Mhepo 4920 Smart Mesh Mushandisi Chinyorwa
April 26, 2018 April 27, 2018 10 Comments pane AirTies Mhepo 4920 Smart Mesh Mushandisi Chinyorwa
1 AirTies Mhepo 4920 Smart Mesh Mushandisi Chinyorwa
1.1 Kurumidza Kuiswa Guide
1.1.1 Related Manual / Zvishandiso
Kurumidza Kuiswa Guide
1600 Mbps Smart Mesh Access Point Mhepo 4920
1. Isa imwe Air 4920 padhuze ne router yako uye ubatanidze iyo miviri uchishandisa iyo yakavharwa Ethernet
tambo (yero plug).
2. Unganidza mudziyo weMweya 4920 kune mains uye tinya switch yemagetsi.
3. Mira kusvikira ese ma5 GHz uye 2.4 GHz ma LED ari akasimba akasimba Izvi zvinogona kutora kusvika pamaminitsi gumi nemashanu.
4. Iye zvino, unogona kubatanidza nharembozha kune yako nyowani isina waya network.Factory default network zita uye password zvakanyorwa pazasi peichi mudziyo.
- Pane mumwe mutengi (semuenzaniso laptop, foni kana piritsi)
batanidza kunetiweki pane zvakanyorwa.
- Pinda network network kana iwe uchikurudzirwa.
5. (Inesarudzo) Unogona kushandura network zita (SSID) uye password yenetiweki yako.
Batanidza kunetiweki yako, vhura iyo web browser uye nyora "http: //air4920.local" kune iyo
kero bar. Pinda uye enda kune ZVINOKOSHA SETUP kubva kuruboshwe pane. (Default password yekushandisa haina chinhu.)
WEDZERA YAKO WiFi KUFUNGWA (MESH):
Kugadzirira: Kubatanidza iyo nyowani Air 4920
1. Mukamuri mune iyo router, isa iyo nyowani Air 4920 chinhambwe chakakomberedza matatu
metres kubva kune iripo Air 4920 chishandiso, chiisanganise nayo kune mains uye mirira kusvikira ese ma5 GHz uye 2.4 GHz maLED ari kupenya girini (4 masekondi ON, masekonzi 4 KUZVIMBISA). Izvi zvinogona kutora kusvika pamaminitsi matatu.
2. 2.a Dhinda bhatani reWPS pane iripo Air 4920 (padhuze neiyo router) kwemasekondi maviri uye
ipapo pane iyo nyowani Air 4920 kwemasekondi maviri (2.b).
Iyo 5 GHz uye 2.4 GHz maLED tanga kupenya uye zvishandiso zvinobatana otomatiki. Izvi zvinogona kutora kusvika pamaminitsi mashanu. Iko kubatana kwakasimbiswa kana iyo Ma LED anovhenekera girini (Iyo 5 GHz LED inodzima KAPFUPI kamwe mumasekondi mashanu ega ega).
Makorokoto, iwe wakabudirira kugadzirisa yako nyowani kifaa. Yako aripo Air 4920 network zvitupa zvinogadziridzwa otomatiki kune yako nyowani Air 4920.
Cherechedza: Kana iyo 5GHz LED pane chishandiso chitsva isingavheneke girini mukati memaminitsi mashanu,
ndapota dzokorora nhanho 2.
Kugadza iyo Mhepo 4920 mukamuri yesarudzo yako
3. Iyo nyowani Air 4920 ikozvino inogona kubviswa uye kuiswa mukamuri yesarudzo yako.
Kubatana kuchasimbiswa otomatiki. Maitiro aya anotora kusvika maminetsi matatu.
Ongorora: Kana 5 GHz LED isingavheneke girini (Iyo 5 GHz LED inodzima PFUPI kamwe kamwe mune yega yega
5 masekondi) mukati memaminitsi matatu, ndokumbira utarise chitsauko «Troubleshooting» (peji 5).
4. (Inesarudzo) Iye zvino, unogona kubatanidza michina ine waya (mune ino example, iyo Set-yepamusoro Bhokisi) kuMhepo 4920 uchishandisa iyo ethernet tambo (yero plug).
5. (Inesarudzo) Unogona kuwedzera mamwe maMweya 4920s kunetiweki yako nekudzokorora matanho kubva ku1.
Kuvandudza isina waya kufukidza
Kana iwe uchida kuvandudza isina waya kufukidza mune imwe kamuri, unogona kumisikidza imwezve Air 4920. Unogona zvakare kubatanidza zvishandiso kuburikidza neEthernet kune iyi Air 4920 (for example STB, komputa kana mutambo koni).
Kana iyo nzvimbo yaunoda kufukidza iri kure kure neako aripo Air 4920, unogona kuisa yekuwedzera Air 4920s kusvika ipapo.
MAZANO OKUITA BASA RAKANAKA:
- Dzima sevhisi isina waya pane yako modem.
- Chengeta mauniti kure ne:
- Anogona manyuko emagetsi kupindira. Zvishandiso zvinogona kukonzeresa zvinosanganisira mafeni edenga, masystem ekuchengetedza imba, ma microwave, maPC, uye nhare dzisina tambo (nharembozha uye base).
- Mahara makuru esimbi uye zvinhu. Zvinhu zvakakura nenzvimbo dzakapamhamha dzakadai segirazi, madziro akasungirirwa, matangi ehove, magirazi, zvidhina, uye madziro ekongiri zvinogona zvakare kushomeka masaini asina waya.
- Kunobva uye nzvimbo dzekupisa senge maovheni nemakamuri ezuva pamwe chete nechiedza chezuva chakanangana kunyangwe paine mhepo yakanaka.
- Zvakare, zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti simba risingapindike (UPSes) (kana, zvirinani, vadziviriri vekudzivirira) anoshandiswa kuchengetedza Mhepo 4920s uye nezvimwe zvishandiso zvemagetsi (VDSL modem, ma routers / magedhi, set-yepamusoro mabhokisi, maTV, nezvimwe. ) kubva panjodzi dzemagetsi. Dutu remagetsi, voltage surges uye dzimwe njodzi dzinosanganisirwa neyemagetsi gridhi yemagetsi inogona kukonzera kukuvara kukuru kumagetsi emagetsi. Mukuwedzera, kunyangwe 1-yechipiri kukanganiswa kwesimba remagetsi kunogona kukonzera ma modem ese, vatengi vasina waya, maTV, set-top mabhokisi, nezvimwewo kuti vadzingwe kana kudzoserwa. Kunyangwe kana michina ikatanga otomatiki, ichave maminetsi akati wandei masystem ese asati adzoka online uye anotendera iwe kunakirwa neInternet-based services.
- Kudzokera kumagadzirirwo efekitori:
Kuti udzore chinhu kumafekitori, tinya pasi pane bhatani rekumisazve (mune yakavhurika diki kumashure) kwemasekondi gumi. Iyo paperclip yesimbi (iine tambo yakatambanudzwa) kana yakasimba yekukwesva meno kazhinji sarudzo dzakanaka dzeiri basa. Kana gadziriso yekumisikidza ikasimudzwa, ma LED ari kumberi anozo "shimmer" kwenguva pfupi uye iyo unit ichaitazve (mune angangoita maminetsi matatu) kune zvigadziriso zvefekitori.
- Kana iwe ukagadzirisa ako marongero enetiweki, ndapota nyora apa:
Network Zita: ………………………………………………………………………
Network Password: …………………………………………………………………
Mushandisi Wepamhepo Pasiwedhi: …………………………………………………… ..
Ichi chigadzirwa chinoshandisa software yakagadzirwa neyakavhurika sosi nharaunda. Chero yakadaro software ine rezinesi pasi pemitemo chaiyo yelayisensi inoshanda kune iyo chaiyo software (seGPL, LGPL nezvimwewo). Ruzivo rwakadzama pane anoshanda marezinesi uye marezinesi mazwi anogona kuwanikwa pane chishandiso mushandisi interface. Nekushandisa ichi chigadzirwa, unobvuma kuti watoraviewed akadaro marezinesi emitemo uye kuti unobvuma kusungwa nawo. Iko mazwi akadaro anokupa iwe kune iyo kodhi kodhi yesoftware yakataurwa, iyo kodhi sosi ichaitwa kuti iwanikwe pamutengo pakukumbira kubva kuAirTies. Kuti uwane kopi yekodhi yekodhi, ndapota tumira chikumbiro chako nekunyora kuburikidza neemail ku [email inodzivirirwa] kana kuburikidza neye hozhwa tsamba ku: AirTies Wireless Kutaurirana Gulbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Kwete: 5 Celik Is Merkezi, Mecidiyeköy, 34394 ISTANBUL / Turkey AirTies ichakutumira tsamba kuCD ine iyo yakakumbirwa kodhi kodhi yemadhora 9,99 pamwe nemutengo wekutumira. Kuti uwane ruzivo ndapota nyorera [email inodzivirirwa]
Related Manual / Zvishandiso
Bluetooth Mesh Networking Mushandisi Chinyorwa
Bluetooth Mesh Networking Mushandisi Chinyorwa - Yakagadziridzwa PDF Bluetooth Mesh Networking Mushandisi Chinyorwa - Chekutanga PDF
SHARP Mhepo Inodzora Mushandisi Manual
Gelius AIR TWS Headset Mushandisi Chinyorwa
Gelius AIR TWS Headset User Manual Gelius AIR TWS Headset User Manual - Yakagadziridzwa PDF Gelius AIR TWS...
Hisense Mhepo Inotonhodza Sisitimu Yemushandisi Chinyorwa
Hisense Mhepo Inotonhodza Sisitimu YeMushandisi Manyorerwo sevhisi-kubata-hisense-nyowani-nyaradzo-wandmodel-Yakagadziridzwa
November 16, 2018 pana 12: 51 am
Ini handikwanise kuwana password kuti ndipinde kune iyo extender, sezvakataurwa mubhuku bhuku rekuti password iri gumbeze, ini ndinoedza izvi uye handina kuwana mukana, uye ini ndatsvaga iyo default default password uye ini handina kuwana mu pasuru yeiyo kana mune iyo inowedzera pachayo.
April 15, 2020 pana 6: 54 pm
bhatani rangu rekuzorora rakatyorwa saka ndingaizorodza sei ndisina bhatani? ……
uye hapana anouya kuzogadzirisa mumba…
May 20, 2021 pana 3: 18 am
Unogona kuseta zvakare nekuchengeta pinda bhatani reWPS masekondi gumi
Mary Buckman anoti:
June 25, 2020 pana 7: 54 am
handife ndakatenga izvi zvakare! ivo vakanaka pavanenge vachishanda nemazvo, asi kana ipo pazasi hapana wekufonera rubatsiro ndakaedza kufona nhamba dzese dzandinogona kuwana
October 16, 2020 pana 6: 29 pm
Inogona here AirTies 4920 extender kushanda mune mesh network ine AirTies 4921 extender?
Kelvin Miller anoti:
November 22, 2020 pana 4: 16 am
Ndine zvikamu zviviri zvemhepo. Imwe yekukwira masitepisi uye huru unit yakabatana kune modem yakadzika masitepisi. Ndine imwe yepamusoro padivi pecube rangu remoto asi iyo cube inongobatana kune imwe pasi masitepisi. Zvinotaridza senge zvinhu zvinoverengeka nenzvimbo iri kubatanidza kudzika masitepisi panzvimbo yeiyo imwe yepamusoro Pane nzira here yekumanikidza zvinhu izvi kuti zvibatanidze kune yekuvhara unit?
Andy Mulchek anoti:
December 1, 2020 pana 4: 02 pm
Ini handisi kutsigira, asi kunzwisisa kwangu ndekwekuti chikamu chakabatana nemodem chinosimbisa network, uye chaizoshandiswa mumba mese. Zvimwe zvikamu zvinowedzera chiratidzo, uye zvinowedzera network yakamisikidzwa kubva kuchikamu chekutanga. Nekudaro, iwe unobatana kunetiweki yakasimbiswa kubva kune yekutanga unit, uye iyo yekuwedzera unit inowedzera iyo chiratidzo chako.
August 24, 2021 pana 8: 05 pm
Ndeipi pini yeWPS yeAirTies Air 4920
September 11, 2021 pana 5: 34 pm
Ini handisi maneja webhodhi iri. Izvi ndizvo zvandakadzidza nhasi. Kwemakore maviri ndaive ndakabudirira kushandisa maviri maAirTies 4920 mayuniti, ayo andakange ndatenga semaviri pakiti (saka ivo vaviri vaive neyakafanana fekitori-seti wifi zita uye password). Kuiswa kwepakutanga kwaive nyore.
Nhasi ndawedzera chechitatu 4920 unit. Ndisati ndatanga, iwo maviri epakutanga mayuniti aishanda (iyo 5 GHz bhatani yaibaya baya masekondi mashanu). Pane yangu laptop, ndakaona imwechete yeiyo fekitori-seti wifi zita, uye ini ndaigona kubatanidza kwariri ndisina waya ndichishandisa fekitori-set password. Ini ndinogona zvakare kubatanidza kune chero unit ndichishandisa ethernet tambo.
Panguva ino komputa yangu yaigona zvakare kuona yakapihwa-yechitatu unit mune yayo wifi network runyorwa, asi ini handina kukwanisa kubatanidza kwariri ndichishandisa rakasiyana fekitori-seti wifi zita uye password. BTW, pane imwe nguva, ini ndinogadzirisazve mauniti matatu kumafekitori avo ndichishandisa pepa mugomba reRetet mugomba padyo netambo yemagetsi, asi izvo zvaigona kunge zvichingodiwa chete kuchikamu chechitatu chandakatenga "chakashandiswa zvinyoro".
Iyo 4920 unit inosunganidzwa kuburikidza neethernet tambo kune iyo router, ndiyo tenzi. Kuwedzera iyo yechitatu unit, ini ndakaiisa simba pane angangoita mashanu tsoka kubva kuna master unit. Hapana ethernet tambo yakasungirirwa kune yechitatu unit. Ini ndakadzvanya kwemasekondi maviri bhatani reWPS pane master unit. Ini ndakazodzvanya pachikamu chechitatu bhatani reWPS kwemasekonzi maviri. Ndakamirira 5-2 maminetsi, uye ese mauniti '2 GHz bhatani rakatanga kudzima masekondi mashanu ega (yechitatu unit yakatora nguva yakareba). Panguva iyoyo, ikozvino ine mauniti matatu akaiswa simba, komputa yangu yakaona chete iro wifi zita remaster unit (iyo yakabatana netambo kune iyo router).
Uchishandisa admin yangu router web peji, ini ndaigona kuona kuti iyo router yaive ichiona ese matatu mayuniti (imwe neimwe iine IP kero). Uchishandisa iyo MAC kero inoratidzwa pane iyo router admin peji uye pazasi peatenzi unit, ini ndaona iyo IP kero yeatenzi unit. Zvino pane yangu laptop, ini ndakapinda iyo IP kero mune itsva browser tab, uye izvo zvakandibvumidza ini kuti ndichinje wifi zita uye password. Wapedza (usayedze kushandura wifi zita uye password pane mamwe maviri mauniti).
Ikozvino, neese ari matatu anoshanda, ndinogona kufamba famba nemidziyo yangu mbozha uye ivo vanozvibatanidza otomatiki kuchikamu chine chiratidzo chakasimba kwazvo. Yakanyanya kupora uye inobatsira. Ndinoshuva dai ndakazviita makore maviri apfuura.
Ini ndakachengeta wifi ya router. Kwandiri ini handisi kuona kupindirwa kwazviri, saka ndiri kuzvichengeta semusana, kungangoitika kana ndichifanira kudzokera kune wifi's router. BTW, mune yangu mamiriro, iyo wifi chiratidzo kubva kumatatu ese mayuniti akasimba zvakanyanya kupfuura iyo router, uye isina waya kumhanya yakapetwa kaviri nekukurumidza, kumusoro uye pasi.
January 14, 2022 pana 2: 28 am
Zvinogoneka here kushandisa iyi range extender ine wechitatu-bato router? Ini ndoda kuziva kuti WPS pin code chii pane anoziva here?
Sevha zita rangu, email, uye websaiti mune ino browser kwenguva inotevera pandinotaura.
AJAX 8706 KeyPad Wireless Kubata Keyboard Mushandisi Manual
Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman Ane Snowflakes Mirayiridzo Yekuraira
AJAX 17938 12V PSU yeHub/Hub Plus/ReX Power Supply Unit Manual
AJAX 10306 Transmitter Wired kune Wireless Detector Converter Mushandisi Manual
MARKO L PETERKA on ZERFUN G8 Pro Wireless Maikorofoni System Mushandisi Manual
Kurt on Airrex infrared hita AH-200/300/800 Mushandisi Chinyorwa
2017 Toyota Camry Hybrid LE Fuse Box Diagrams on Toyota Camry Passenger Fuse Bhokisi Dhiagramu
2017 Mitsubishi Lancer 4WD Fuse Box Diagrams on Mitsubishi Lancer Passenger uye Injini Fiyuzi Bhokisi Dhiagramu
K Townsend on Mira Kutendeseka ERD Bar Valve uye Fittings Mushandisi Chinyorwa